नयाँ कार्य योजना ल्याउन आबश्यक छ - Tulsipur Khabar नयाँ कार्य योजना ल्याउन आबश्यक छ - Tulsipur Khabar
नयाँ कार्य योजना ल्याउन आबश्यक छ
स्थानीयपालिकामा निर्वाचनको चर्चा शुरु भएको छ । पहिले जिम्मेवारी पाएकाहरु संगै नयाँ नयाँ उमेदवारहरु मैदानमा देखिने क्रम शुरु भएको छ । निर्वाचन सगै अव घोराही उप–महानगरपालिकाको चक्रपथ निर्माणको काम कसरी अघि बढ्छ । यसै सन्दर्भमा पत्रकार शरद अधिकारीले घोराही नगरपालिकाका पूर्व उप प्रमुख तथा घोराही नगरस्तरिय चक्रपथ निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दामोदर अधिकारीसंग गरेको कुराकानी
अव घोराही उप–महानगरपालिका भएको छ, चक्रपथ निर्माणको काम कसरी अघि बढाउने सोचमा हुनुन्छ ?
घोराही नगरपालिका मात्र हुँदा ११ वटै वडालाई सहरसंग जोड्जे गरि चक्रपथको अबधारणा अघि सारिएको थियो । सोही अनुरुप केही काम पनि सम्पन्न भइ पनिसकेको छ । अब यो उप–महानगरपालिकाको सन्दर्भमा भित्रि रिङरोड हुनेछ भने बाहिरी रिङरोडलाई जोड्नुपर्छ ।
पहिलेकै योजना अलपत्र छ । नयाँ योजना कसरी सफल होला ?
अब नयाँ योजनाको सन्दर्भमा यो बृहत छ, तर सजिलो छ । तपाईलाई मैले यो भन्छु की दक्षिण–दक्षिण हुदै कुईरेपानी धारापानी हुँदै आन्द्राभरियाबाट उत्तर कर्मटिया हुँदै तेघरासम्म जोड्नु पर्दछ । त्यसपछि तेघरा–खैरा हुँदै खैरीको बाटो फराकिलो बनाएर यो बाटो साबिक हापुरको अवलडाँडाँ हुँदै उक्तर बगियाँ गाउँ हुँदै यो बिजौरी डाँडाँसम्म पुराउनुपर्छ । बिजौरी डाँडाँबाट निक्लेको घोराही रक्षाचौर सडकलाई पकड्दै सेवार बनगाउँ स्कुलमा आउनेछ । त्यसपछि उत्तर लागेर तितेपानीको सडक सहित तुरुन्तपुरको उत्तर हुँदै गिठेपानी आईपुग्ने छ । त्यहाँबाट मसिनाको उत्तर तिरको बाटो हुँदै यो अम्बापुर जोडिनेछ । त्यसपछि अम्बापुर बाट दक्षिण लाग्दै प्युठान रोडमा जोडिने छ । त्यसपछि पुर्ब लागेर सिस्नेखोला पुग्ने छ । सिस्नेखोलाबाट दक्षिण लागि डाँडाँगाउँको पुरानो बाटो हुँदै बिपि मार्गमा जोडिनेछ । बिपिमार्गबाट रामपुर बजार पुग्नेछ । त्यसपछि दक्षिण निमुरिया हुँदै यो बाटो बबई नदीमा पुराउन सकिन्छ । यी बाटाहरु अहिले पनि ९, १०, १२ मिटरका छन् । भबिश्यमा यसलाई विस्तार गरेर बाहिरी रिङरोड बनाउने र अहिलेको चक्रपथलाई भित्री चक्रपथका रुपमा बिस्तार गर्ने हो भने घोराही उप–महानगपालिकाका लागि निकै राम्रो हुन्छ ।
२० बर्ष पछि मुलुकमा स्थानीयपालिका निर्बाचन हुँदैछ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
निर्बाचन आबधिक समयमा हुने लोकतान्त्रीक अभ्यास हो । तर मुलुकको परिस्थितिले निर्बाचन हुँन सकेन यो बिडम्बना हो । जब जब स्थानीय निर्बाचन हुन सकेन त्यही मौका छोपेर राजा ज्ञानेन्द्रले कू गर्ने मौका पाए । अब निर्बाचन जुन हुँदैछ, अब यो निर्बाचनमा २० बर्ष पहिले जन्मेका युवाहरु आजको मतदाता भसकेका छन् । यी युवाहरुलाई समग्र परिचालनको लागि रोजगारी प्रदान गर्न नयाँ कार्य योजना ल्याउन आबश्यक छ ।
पहिले र अहिले स्थानीय तहको अधिकार फरक छ जनप्रतिनिधीहरुको रुपमा आउनेहरुले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्ला ?
तपाईको प्रश्न ठीक छ । अहिले स्थानीय सरकारको निर्बाचन हुँदैछ । यसमा वडाका अध्यक्षहरु, गाउँपालिका नया उप–महानगरपालिका र महा–नगरपालिकाको प्रमुख, उप प्रमुख, र त्यहाँ निर्बाचीत हुने जनप्रतिनिधीहरु प्रशासक बन्न सक्नुपर्छ, योजनाकार बन्न सक्नुपर्छ, नीति निर्माणकर्ता बन्न सक्नुपर्छ । न्याय सम्पादन गर्न सक्ने हुनुपर्दछ । यसरी अधिकारलाई सम्पादन गर्न सक्ने क्षमताभएका ब्यक्तिहरु चयन हुनुपर्दछ ।
तपाई त घोराहीको उपप्रमुख हुनुभयो, लामो समय चुनाब भएन, अब हुँदै छ, कुनै थिए अधुरा अपुरा सपनाहरु ?
म घोराहीको उपप्रमुख भएको हँु । निर्णयमा माइन्युट हेरेहुन्छ । मैले तरकारी ब्यबस्थापन गर्ने कामको संयोजक भएर काम गरेको थिए । बसपार्क निर्माण छनोट समितिको संयोजक हुँ । अहिले पनि घोराही नगरपालिकाको चक्रपथ निर्माण तथा उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष हुँ । मैले धेरै अबरोधका बाबजुत पुरानो र अहिले गरि १५ कि.मीको बाटो निर्माण गरिसकेकोे छु । उपप्रमुखको पदभार समाप्त भएपछि दुई बर्ष पार्टी प्रतिनिधीको रुपमा भाग लिएँ । त्यसै अबस्थामा बाटाघाटा, ग्राभेल गर्ने कामहरु साथै बिकट रहेका पहाडी भेगहरुमा सोलार बत्तिको ब्यबस्थापन गर्ने जस्तै ५ नं. वडा, ६ नं. वडा, ७ नं. वडामा यो काम सम्पन्न भएको छ । अब मेरा अधुरा कामहरु भनेका घोराही क्षेत्रमा माथी उल्लेखित कार्यहरुलाई दिगो दरिलो गराउने काममा र बजारमा भएको अब्यबस्थीत कामहरुलाई ब्यबस्थापन गर्ने र शहरलाई सुन्दर बनाउने र नजिकका शहरहरु संग सम्बन्धन गर्ने । आधुनिक ल्याण्डफिल्ड साइटलाई करिब २५ करोड लागत मा सम्पन्न गर्ने अनि घोराहीका ११ बटै वडामा सरसफाईको काम पुरा भएको छैन । अनि पानी रिचार्जको निम्ति केही काम भएपनि पुरा भएको छैन् ।
घोराहीको भबिष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?
घोराही उप–महानगरपालिकाको भबिष्य उज्जवल छ । यहाँ धार्मीक पर्यटकीय बिस्तार, सामाजिक सद्भाब बिस्तार, खेतियोग्य जमिनको प्रयाप्तमात्रा, बजार ब्यबस्थापनको उचित प्रबन्धन जस्तो घोराही बजार, नारायणपुरबजार, सैघाको राम्चे, पाँचपोखरीको बजार, रामपुर बजार, हर्नक बजार, धर्नाको छिटपुर बजार अनि पर्यटकिय दृष्टिकोणले रहेका रत्ननाथ मन्दिर, माराकोट टापु, झिन्टिकोटको भ्यूटावर, धर्नामा प्रसिद्ध रहेको पाण्डबेश्वर धाम, सुनकोटको भगबती मन्दिर र भ्यू टावर, धर्नामा रहेको पुरानो सरिकोट मन्दिर र त्यहाँ रहने भ्यू टावर सवारीकोटमा रहेको प्याराग्लाईडिङ, रामपुरमा रहेको चरिङ्गे दह, मान्द्रेकोट हरनोक, होडबाङ र सातम र मपुललाई समेत होमस्टे बनाइयो भने पर्यटकीय नगरि बनाउन सकिन्छ ।
मुलुकभर १३ वटा उप–महानगरपालिका हुँदा घोराही पटक पटक उत्कृष्ट भएको थियो । अब पनि उत्कृष्ट बनाउन के गर्न सकिन्छ ?
नगरपालिकाहरु तत्कालीन समयमा स्थानीय स्वायत शासन र नियमावली २०५६ अनुसार चलेको हो । यसमा सबैलाई भ्रम छ । यो बिकाश निर्माणको कारणले होईन । यसमा त नियमित बैठक बस्यो कि बसेन, समयमा परिषद् ग¥यो कि गरेन, मापदण्ड अनसार कर्मचारी भर्ना ग¥यो कि गरेन, अनि आर्थिक सम्पादनलाई ब्यबस्थित गरेको छ कि छैन, यसका आधारमा गरिने मुल्याङ्कन २०५६ को नियमावली बमोजिम भएको हो र यो कुरा म बिकाश प्रेमी बुद्धिजिबी, कर्मचारी, जनसमुदाय, सबैमा राख्न चाहन्छु । बिकाश ग¥यो भनेर प्रथम भएको होईन । कानुनी सुचक पुरा ग¥यो कि गरेन भन्ने आधारमा कानुनी सुचक पुरा गरेको आधारमा प्रथम, द्वितृय, तृतिय सबै भएको हो । अब स्थानीय सरकारले कानुन अनुसार पुरै मापदण्ड पुरा गर्नुपर्छ र उत्कृष्ट बनाउन सकिन्छ र यसको मापदण्ड माथिल्लो तहले होईन जनताले मुल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पुनः जिम्मेवारी लिनुप¥यो भने तपाई तयार हुनुन्छ ?
यो सबै जिम्मेवारी लिनको निम्ती र माथि उल्लेखित कार्यहरु गर्नको निम्ति म तपार्एको पत्रिका मार्फत उम्मेदवारीको सूचना जारी गरेको हुँ र पार्टीले मुल्याङ्कन ग¥यो र मलाई उम्मेद्वारी दियो भने निश्चित रुपमा बिजय हासिल गरेर यो काम पुरा गर्नेछु ।
मुलुक संघियतामा गएको छ । मुलुकको भबिष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?
मुलुक संघियतामा गएको छ । संबिधानले पनि धेरै अधिकारहरु तहगतरुपमा जनतामा प्रत्योजित गरेको छ । जनताको सेवालाई सहज र सरलीकरण गर्न सकियो भने यो मुलुक अगाडि बढ्छ भन्ने बिश्वास लिएको छु ।
अन्त्यमा आदरणिय न्यायप्रेमी जनसमुदायले म नेकपा एमालेको एउटा कार्यकर्तालाई जिताउनुभयो भने खेलकुद, खानेपानी, मनोरन्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा स्वरोजगार, महिला उत्थान, दलित समुदायको सम्मान, हामी सबै नेपाली हौँ भन्ने भाबना वडा स्तर र ग्रामिण क्षेत्रलाई समेटेर कृषि क्षेत्र कलकारखाना, घरेलु उद्योग क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, बन क्षेत्रको समुन्नत बिकास, पर्यटन उद्योगको बिकास, सहर र गाउँको भेदभाब सबै हटाउनुको निम्ती मैले उम्मेद्वारीको चाहना राखेको हुँ । नेकपा एमाले कति संबेदनशील हुन्छ अनि नेकपा एमालेले ईज्जत कति सम्झन्छ मलाई टिकट दियो र जनसमुदायले बिजय गराउनुभयो भने माथि उल्लेखित सहित तपाईको भाबना अनुरुप काम गर्ने छु । तर म पार्टीको विद्रोही उम्मेदवार होईन यी कामहरु कुनैपनि उम्मेदवारले जित्यो भने म उप–महानगरपालिकाको कार्यालयमा दिन दैनिक यि प्रस्ताबहरु राख्नेछु । यी कामहरु अत्यन्त जटिल छन् । यस्को निम्ति कानुन निर्माण गर्नको लागि कानुनबिज्ञ, प्रशासन संचालनन गर्नको लागि प्रशासन बिज्ञ, शिक्षा संचालनको लागि शिक्षाबिज्ञ, यस्तै स्वास्थ्यमा स्वाथ्य बिज्ञ, हरेक क्षेत्रमा बिज्ञहरुको सहयोगमा एउटा बृहत गोष्ठी र उपसमिति गठन गरि समृद्ध, सुसम्पन्न, सभ्य घोराही उप–महानगरपालिका बनाउनेछु ।
च्याम्बर अफ कमर्सको प्रेस सल्लाहाकारमा बस्नेत
पाँच बर्ष भित्र तुलसीपुरको सम्बृद्धि : पाण्डे